मनोरञ्जन | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
काठमाडौँ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जीवनमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न…
नाच्न र अभिनय गर्न नआउने रैछ हाम्री मिस नेपाल
काठमाडौं । मिस नेपाल–२०१८ की शृंखला खतिवडाले फिल्म नखेल्ने बताएकी छन्।
मिस नेपाल भएपछि पहिलो पटक गृहनगर डेटौंडा गएकी खतिवडाले सञ्चारकर्मीसँग भनिन्, मलाई अभिनय र नाच्न पनि राम्रो आउँदैन। मिस नेपाल हुनेवित्तिकै अभिनय आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन।
आर्किटेक्टको विद्यार्थी भएकाले उक्त…
यो फिल्मले रिलिज नहुँदै ५० मिलियन डलर कसरी कमायो ?
लसएञ्जलस । हलिउडको बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘एभेन्जर्स इन्फिनिटी वार’ शुक्रबार प्रदर्शन हुँदै छ । यो फिल्मको संसारभर एक हप्ताअगाडिदेखि नै बुकिङ सुरु भइसकेको छ । फिल्मको प्रि–टिकट बिक्रीबाट ५० मिलियन डलर कमाइ भइसकेको छ ।
काल्पनिक दुनियाँको सुपर हिरोलाई लिएर एन्थनी…
नेपाली नेता र व्यापारीले मगाउन थाले विदेशबाट युवती !
काठमाडौँ । नेपाली समाज सेक्सका मामिलामा पछिल्लोपटक उदार बन्न थालेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ‘रेड लाइट’ एरिया छैन् । लुकीछिपी यौन व्यवसाय भने फस्टाइरहेको छ । नेपालको कानुनले यौन व्यवसायलाई अवैध मानेको छ । प्रहरीले रातबिरात छापा मारेर होटल,…
अर्का चर्चित अभिनेतालाई पनि छ महिनाको जेल सजाय
नयाँदिल्ली । बलिउड अभिनेता राजपाल यादवलाई अदालतले ६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ । चेक बाउन्स गरेको अभियोगमा चर्चित अभिनेता यादवलाई यो सजाय सुनाइएको हो ।
अदालतले उनीमाथी लागेका सात आरोपका लागि प्रति आरोप १.६ करोड भारू जरिवानाको पनि फैसला…
यसकारण फ्लप आँचल
काठमाडौं । अभिनेत्री आँचल शर्माका अधिकांश फिल्म फ्लप छन् । आँचल सुन्दर छिन् । तर, उनको अभिनयले आफ्नो रुपको सुन्दरता जस्तै गरेर जादु देखाउन सकेन । ‘शत्रु गते’ हिट भएपनि आँचलको भूमिका कतै पनि देखिएन । ‘शत्रु गते’मा पुराना…
एजेन्सी । हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टेइनका एकपछि अर्को गर्दै यौनजन्य हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ ।न्यूयोर्क टाइम्सले निर्माता हार्वेले यौन शोषण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेपछि यौन उत्पीडनमा परेका महिलाहरुले उनीमाथि आरोप लगाउने क्रम बढेर गएको हो…
भर्जिन अटलान्टिक विमानमा यात्रा गरिरहेकी एक महिलाले उडिरहेको विमानमा नै शारीरिक सम्बन्ध राखेर सबैलाई चकित बनाएकी छन् । १३ मार्चमा गटविक एयरपोर्टबाट मेक्सिकोका लागि उडेको विमानमा ती महिलाले अपरिचित व्यक्तिसँग छोटो कुराकानीपछि यौन सम्बन्ध राखेकी हुन् । सो फ्लाइट…
आइपीएल मैदानमा सेलिब्रेटी, हल बन्यो सन्नाटा
काठमाडौं । गत आइतवार दिउँसो स्टार स्पोर्ट्स च्यानलमा भारतका दुई चर्चित व्यक्तित्व अमिताभ बच्चन र कपिल देव एकआपसमा बातचित गरिरहेका थिए। दुवैले प्रश्न सोध्न पाउने र जवाफमा दिन पाइने छुट थियो।
अमिताभ बलिउडका सबैभन्दा ठूला स्टार हुन् भने कपिल देव…
यी हुन् अंग प्रदर्शनका कारणले टिकेका र बिकेका बलिउड अभिनेत्री
काठमाडौँ । बलिउड ट्यालेन्ट अभिनेत्रीले भरिभराउ छ । तर पनि बलिउडमा केही यस्ता अभिनेत्री छन् जो ट्यालेन्टले भन्दा बोल्ट अन्दाजले अर्थात अंग प्रदर्शनका कारणले टिकेका र बिकेका छन् । अहिले चर्चाको विषय ती अभिनेत्री हुन् । जुन अभिनेत्री हट…
नेपाली नेता र व्यापारीले मगाउन थाले विदेशबाट युवती ! 46 views
यसरी पक्राउ परे ३३ किलो सुन तस्करीमा एसपी विकासराज खनाल, गृहमन्त्रालयबाटै खनाल नियन्त्रणमा 21 views